ईर्ष्या को बारे मा 40 वाक्यांश | स्वयं सहायता संसाधन
मारिया जोस रोल्डन | 19/04/2021 19:33 | वाक्यांशहरू
यदि तपाईंले कहिल्यै ईर्ष्या महसुस गर्नुभएको छ भने, तपाईंलाई थाहा हुनेछ यो अनुभूति गर्न खुशी छैन। यो सामान्यतया तब हुन्छ जब हामी बुझ्छौं कि अर्को व्यक्तिको गुणस्तर छ, राम्रो छ वा हामी केहि गर्न चाहन्छौं जुन हामीसंग छ र हामीसँग छैन। यद्यपि यो मानवीय भावना हो, हामी यसलाई अप्रिय र यसले भावनात्मक असुविधा उत्पन्न गर्दछ र अन्य व्यक्तिहरूमा अविश्वास उत्पन्न गर्दछ।
जीवनमा सफल भएको व्यक्ति सँधै उसको वरपरका मानिसहरूबाट ईर्ष्या जगाउँदछ। ईर्ष्यालु मानिसहरू उभिन सक्दैनन् कि अरुहरू आफैं भन्दा बढी सफल भएको छ।
यस्तो पनि हुन सक्छ कि यदि तपाईं ईर्ष्यालु व्यक्ति हुनुहुन्न भने, के तपाईले कहिल्यै त्यस्तो व्यक्ति भेट्नु भएको छ जसले तपाईप्रति ईर्ष्या गरेको छ? यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरूको सामना गर्न गाह्रो छ, विशेष गरी जब ती ईर्ष्यालु व्यक्ति तपाईंको वरिपरिको जीवनमा हुन्छन्। साथै, ईर्ष्यालु व्यक्तिले चालु आधारमा अनावश्यक खतरा महसुस गर्दछ।
ईर्ष्या के हो
ईर्ष्यालु व्यक्तिको पहिचान सधैं सजिलो हुँदैन। यो सामाजिक भावनाले असुविधाको कारण दिन्छ र सधैं असहमति सम्बन्ध मानेको छ जब हुन्छ (यो वास्तविक हो वा होइन)। यो सँधै अन्य व्यक्तिको तुलनासँग सम्बन्धित छ। जब हामी ईर्ष्या महसुस गर्छौं यो कार्य गर्नु आवश्यक छ।
कहिलेकाँही तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ईर्ष्या प्रशंसाको चिह्नको रूपमा, तर जब ईर्ष्या बढि द्वेषपूर्ण हुन्छ, यसले लुकाउँछ। यस तरिकाले ईर्ष्यालुले आफ्नो कमीलाई लुकाउँछ र आफैलाई बचाउँछ, यसले ईर्ष्यालु व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारले खतरा महसुस गर्नबाट रोक्छ, किनभने ईर्ष्याको भावनाले ईर्ष्यालु व्यक्तिलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ।
यदि तपाईंले कहिल्यै ईर्ष्या महसुस गर्नुभएको छ भने, तपाईं गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा उत्तम कुरा भनेको आफूसँग भएको कुराको लागि कृतज्ञ हुनको लागि काम गर्नु हो र आफुको अभावको बारेमा चिन्ता हटाउनु हो।
ईर्ष्याको बारेमा वाक्यांशहरू
हामीलाई थाहा छ कि जीवनको कुनै कुनै क्षणमा, यदि चीजहरू तपाईको लागि राम्रोसँग जान्छन् भने, मानिसहरूले तपाईलाई के चाहान्छन् र त्यहाँ द्वेषपूर्ण मानिसहरू छन्। जब ती चीजहरू तपाईका लागि खराब भइन्छन् पनि त्यसले रमाइलो गर्दछन्। ताकि तपाई ईर्ष्यालाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र यसको कारण के हुन्छ, ईर्ष्याको बारेमा यी वाक्यांशहरु लाई नबिर्सनुहोस् ताकि तपाई चीजहरुलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र यी वाक्यांशहरूले उस्काउने प्रतिबिम्बले तपाईलाई जीवनमा सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
कृतज्ञता र दया बाट आफ्नो मार्ग अनुसरण को महत्त्व सम्झनुहोस्। र यदि तपाईंले अरूबाट ईर्ष्या प्राप्त गर्नुभयो भने, यो नबिर्सनुहोस् कि यो नराम्रो महसुस गर्नु राम्रो हो, किनभने ईर्ष्या गलत व्यवस्थापन हो। यी वाक्यांशहरु लाई नबिर्सनुहोस्।
दुष्टले ईर्ष्याको साथ हातेमालो गरी उत्पन्न गर्दछ।
हाम्रो ईर्ष्या सधैं ईर्ष्या गर्नेहरूको खुशी भन्दा लामो हुन्छ।
जो ईर्ष्या गर्दैन, हुन योग्य छैन।
क्रोध क्रूर छ, र क्रोध भयंकर छ; तर कसैले ईर्ष्याको सामु उभिन सक्छ? जसले आफ्नो मुखको रक्षा गर्छ उसले आफ्नो प्राणलाई रक्षा गर्छ; तर जसले आफ्नो मुख खोल्छ उसलाई विपत्ति हुन्छ।
कोही ईर्ष्यालु मानिस खुशी छैन।
कसैमा महान् देशी गुण भएको निश्चित संकेत भनेको ईर्ष्याबिना जन्मनु हो।
माइंडफिलनेस ईर्ष्या र ईर्ष्यालाई बन्द गर्दछ, किनकि यहाँ र अहिले ध्यान केन्द्रित गरेर, 'हुनुपर्दछ' को बारेमा चिन्ता हराउँदछ।
निन्दा अज्ञानको छोरी र ईर्ष्याको जुम्ल्याहा बहिनी हो।
ईर्ष्या लागु हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो सजाय हो अवहेलना। उसको कुरा सुन्नु भनेको उनलाई विजयी संकेतको स्वाद लिन दिनु हो।
ईर्ष्या मूर्ख हो किनभने कसैलाई ईर्ष्या लाग्दैन।
ईर्ष्या विषय धेरै स्पेनिश छ। स्पेनिश मानिसहरू जहिले पनि ईर्ष्याको बारेमा सोच्दछन्। केहि राम्रो छ भन्न को लागी तिनीहरू भन्छन्: "यो ईर्ष्यालु छ।"
अन्य व्यक्तिको खेतहरूमा बाली काट्ने समय सधैं बढी हुन्छ।
ईर्ष्यालुको मौन हल्लाले भरिएको छ।
ईर्ष्या सब भन्दा भाग्यशाली विरोधी हो।
ईर्ष्या गर्नु भनेको कायरता भनेको साहसी हुनु हो।
सिसिलीका सबै शासकहरूले ईर्ष्या भन्दा ठूलो सास फेर्ने गरी सकेका छैनन्।
मानिस ईर्ष्यालाई छाड्ने बित्तिकै उसले आफूलाई खुशीको बाटोमा प्रवेश गर्न तयार पार्न थाल्छ।
स्वस्थ ईर्ष्या अवस्थित छैन: दुर्भाग्यवस, सबै ईर्ष्याले असुविधा उत्पन्न गर्दछ र हाम्रो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न हानिकारक हो।
ईर्ष्या एक श्रद्धांजलि हो जुन औसत प्रतिभालाई प्रतिफल दिन्छ।
मित्रको ईर्ष्या दुश्मनको घृणा भन्दा खराब हुन्छ।
ईर्ष्या भनेको तपाईंको आफ्नै भन्दा अरुको उपलब्धिहरूको मूल्यवान्‌ कला हो।
ईर्ष्या प्रतिभाको क्यान्सर हो। ईर्ष्यालु नहुनु शारीरिक स्वास्थ्य भन्दा देवताहरुलाई धन्यबाद दिन एक स्वास्थ्य सुविधा हो।
ईर्ष्या प्रोटीन हो। यसको सबैभन्दा सामान्य अभिव्यक्तिहरू तीतो आलोचना, व्यंग्य, डायट्राबी, अपमान, अपमान, बेवास्तापूर्ण इनौंवेन्डो, दयनीय अनुकम्पा हो, तर यसको सबैभन्दा खतरनाक रूप भनेको चापलुसी हो।
ईर्ष्या एक क्रोध हो जुन प्रायः आफूलाई पुरानो भक्तको रूपमा बदल्दछ।
आफूसँग भएको कुरालाई हानि नगर्नुहोस् तपाईसँग नभएको चाहनाले।
मसँग तीन क्रूर कुकुरहरू छन्: कृतज्ञता, गर्व र ईर्ष्या। जब यी तीन कुकुरले काट्छन्, घाउ धेरै गहिरो हुन्छ।
ईर्ष्या बिना र धेरै बर्षको लागि सुखमय शान्ति भन्दा अधिक चाहना बिना बाँच्नुहोस्, आफ्नो साथीहरु संग मित्रता मा।
सबैभन्दा असुरक्षितले अरूलाई आफुलाई राम्रो महसुस गराउन निराश गर्न कोशिस गर्नेछ।
दूरबीनको माध्यमबाट माया हेर्छ ... माइक्रोस्कोप मार्फत ईर्ष्या।
एक ईर्ष्यालु मानिस कहिल्यै योग्यता माफ गर्दैन।
मलाई घृणा गर्नुहोस्, मेरो न्याय गर्नुहोस्, मलाई आलोचना गर्नुहोस् ... अन्तमा, यसको सबै अर्थ एक समान छ: तपाईं म जस्तो हुन सक्नुहुन्न।
ईर्ष्या महसुस गर्नु भनेको आफैलाई अपमान गर्नु हो।
तपाईं एकै समयमा कहिल्यै खुसी र ईर्ष्यालु हुन सक्नुहुन्न ... तपाईं के हुन चाहनुहुन्छ रोज्नुहोस्।
ऊ एक जनाको खुशी हजारौंको ईर्ष्या हो जसले यसलाई बनाएन।
ईर्ष्या भनेको विष लिनु र अर्को व्यक्तिको लागि प्रतिक्षा गर्नु जस्तै हो।
नारीवाद एक अमूर्त विचार होईन, यो अगाडि बढ्नु आवश्यक छ न कि पछाडि; अज्ञानता र ईर्ष्याबाट टाढा बस।
तपाईले के प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बढि मूल्यांकन नगर्नुहोस् वा अरूलाई ईर्ष्या गर्नुहोस्। जसले अरूलाई ईर्ष्या गर्छ उसले मानसिक शान्ति पाउँदैन।
जब तपाइँ एउटा औंला देखाउनुहुन्छ, याद गर्नुहोस् कि अन्य तीन औंलाहरूले तपाइँलाई औंल्याइरहेका छन्।
ईर्ष्या गलत व्यवस्थापन गरिएको छ।
र यी सबै वाक्यांशहरू मध्ये कुन कुन तपाईं मन पराउनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: स्वयं सहायता संसाधनहरू » पुनरावृत्त » वाक्यांशहरू » Phrases० वाक्यांश ईर्ष्याको बारेमा
धेरै राम्रो र सफल वाक्यांशहरू। म आफूलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्छु।
हामी कसैलाई ईर्ष्या नगरौं। हामीसँग जे छ थोरै भए पनि हामी सँधै कृतज्ञ छौं।